Roob lagu qabowsaday oo ka da’ay deegaano ka mid ah somaliya | Hobyo Media Online
Roob lagu qabowsaday oo ka da’ay deegaano ka mid ah somaliya
Wararka ka imanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in roob lagu qabowsaday uu ka da’ay maanta deegaano ka mid ah degmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe.
Roobka ayaa ka da’ay degmada Mahaday iyo deegaanada ku dhow dhow sida deegaanka Iji,Oobaale, Caadley,Ceelbaraf,Cali Fooldheere,Dhurwayle iyo deegaano kale.
Wararka ayaa waxaa ay ku darayaan in sidoo kale roobka uu ka da’ay deegaano dhinaca galbeed iyo dhinaca Waqooyi ka xiga magaalada Jowhar sida tuulada Libiga,Xaanshooley,Dhaaygawaan,dhumaley iyo qaar kale.
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa ka jirey gobolka Sh/dhexe kuleyl heerkulkiisu uu meelaha qaarkood ku dhowaanayay 40degree. Deegaano badan oo ka mid ah gobolka Sh/dhexe ayaa xoolo dhaqatada waxa ay ka hayaameen deegaanadoodii iyagoo miciin bidey hareeraha wabiga Shabellle.
Bilihii la soo dhaafay ayaa jiilaal adag uu ka jirey guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana dhowaan laga sameeyay inta badan dalka roob doon Alle loogaga baryayo in uu kuleylka ka saaro uuna ummadiisa raxmad kheyr qabta u keena.